बिहान उठ्ने वित्तिकै बेसार पानी खाने गरौ, कहिल्यै नसोचेको फाइदा पाउनुहुनेछ ! - ज्ञानविज्ञान
छालाको समस्याका लागि बेसार अचुक अाैषधि नै मानिन् । बेसनको पीठोमा बेसार र अलिकति मह मिसाएर अनुहारमा लगाउँदा अनुहारमा भएको दागधब्बा हटेर जान्छ । बेसारले उमेर नपुग्दै आउने चाउरीपनाबाट समेत बचाउँछ ।
१- बेसारमा करक्युमिन नामक रसाय रहेको हुन्छ । यसले सुन्निएको शरीरमा दुखाई कम गर्ने काम गर्छ ।
२- बिहान उठ्ने वित्तिकै मन तातो पानीसँग बेसार मिलाएर खाएमा दिमाग तेज हुन्छ ।
३- बेसारले एक शक्तिशाली एन्टीअक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ । यसले क्यान्सर उत्पादन गर्ने कोशिकाहरुसँग लड्ने काम गर्छ ।
४‍- बेसार मिसाएर पकाएको खाना पचाउन सजिलो हुन्छ ।
५- नियमित बेसार पानी पिउँदा यसले रगत सफा गर्नुका साथै शरीरमा रगत जम्न दिँदैन ।
६- शरीर दुखेको समयमा बेसार खाँदा यसमा रहेको करक्युमिन तत्वले दुखाइ कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ ।
७‍- नियमित बेसार पानी पिउँदा अनुहारमा आउने चाउरीपनाबाट बच्न सकिन्छ । यसले सयम नपुग्दै आउने चाउरीपनालाई रोक्ने काम गर्छ ।
८- नियमित बेसार पानी पिउँदा मधुमेहको खतरा कम हुन्छ ।
Topics #के के छन् त बेसार पानी बाट हुने फाइदाहरु ? #नसोचेको फाइदा पाउनुहुनेछ ! #बेसार पानी बाट हुने फाइदा
Don't Miss it यति धेरै रोगहरू ठिक बनाउछ अमला सेवन गर्नाले जानिराखाै !
Up Next हाेसियार बिष बन्न सक्छ यी खानेकुरा दूध सँग खाएमा
बजारमा पाइने प्रशोधित पानी, दूध र दहीमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म
कोलिफर्म के हो ? कोलिफर्म बाहिरी वातावरणमा रहेको पानी, मानिस वा तातो रगत भएका जनावरका दिसामा पाइने गर्छ। यो एक…
अभिभावकहरुले बालबालिकालाई सीकाउनै पर्ने कुरा के के हुन् ? जान्नुहोस
खाना अगाडि र पछि राम्रोसँग हात धुने चम्चाले खाना खाए पनि बालबालिकालाई खाना खानु अगाडि र पछाडि हात धुन लगाउनुपर्छ…